मुखको स्वास्थ्यमा नियमित सरसफाइ गर्न सुझाव, हेलचेक्र्याइँले दाँतका बिरामी बढ्दो – Chitwan Post
मुखको स्वास्थ्यमा नियमित सरसफाइ गर्न सुझाव, हेलचेक्र्याइँले दाँतका बिरामी बढ्दो
प्रकाशित मिति: आइतवार, असार २९, २०७६
भरतपुर । मुखको स्वास्थ्यका लागि नियमितरुपमा दाँतको सरसफाइ गर्न चिकित्सकहरुले सुझाव दिएका छन् ।
हेलचेक्र्याइँकै कारण दाँतसम्बन्धी बिरामीहरु बढेको उनीहरुको भनाइ छ । एपोलो डेन्टल क्लिनिक प्रालिले शनिबार आयोजना गरेको मुखको स्वास्थ्यसम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा बोल्दै कन्सल्टेन्ट अर्थाेडेन्टिस्ट डा. वासुराज पाण्डेले दाँतको नियमित सरसफाइ गरे मुखको रोगबाट बच्न सकिने बताए ।
कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले हरेक छ महिनामा दाँतको परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । बेलैमा दाँतको उपचार नभए बिस्तारै समस्या जटिल बन्दै जाने र उपचार खर्च पनि बढी लाग्ने उनको भनाइ छ । दाँतको आरसिटी उपचार गर्ने प्रक्रियालाई जटिल मानिन्छ । बाङ्गाटिङ्गा दाँत निकाल्दा आँखा र दिमागमा असर गर्छ भन्ने कुरा भ्रममात्र रहेको उनको भनाइ छ । दाँत दुखेपछिमात्रै बिरामीहरु उपचारका लागि आउने गरेको उनले बताए ।
एपोलो डेन्टल क्लिनिक प्रालिकी प्रबन्ध निर्देशक डा. शुष्मा अधिकारीले मुखको स्वास्थ्यका लागि दाँतको सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन् । हेलचेक्र्याइँकै कारण दाँतका बिरामीहरु बढेको उनको भनाइ छ । दाँत कीराले खाएमा तुरून्तै दाँतको चिकित्सकलाई देखाएर उपचार गर्नुपर्ने उनले बताइन् । दाँत कीराले खाने समस्यामा हेलचेक्र्याइँ गरियो भने कीराले बिस्तारै दाँतको नसा हुँदै शरीरको हड्डीसमेत खान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
दाँतका बिरामीहरुले समयमा नै उपचार गरे कम शुल्कमा छिटो निको हुने उनले बताइन् । ‘दाँतको उपचारमा लाग्ने उपकरण र ल्याब शुल्क नै महँगो हुन्छ, त्यसकारण पनि सेवाग्राही उपचार शुल्क सुन्दा डराउनुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘दाँत कीराले खाएर बिरामी भएका सेवाग्राहीहरु बढी आउनुहुन्छ, दाँतको सरसफाइमा ध्यान नदिँदा यस्तो समस्या आउने गर्दछ ।’
मुखको स्वास्थ्यको विषयमा जनसमुदायलाई नै सचेत गराउने उद्देश्यले अभिमुखीकरण कार्यक्रम गरिँदै आएको उनले बताइन् । कार्यक्रममा चितवन र नवलपरासीका गरी करिब ५५ जना सामाजिक स्वास्थ्य स्वयम्सेवकहरुको सहभागिता थियो ।
आज असार २९ अर्थात् भानु जयन्ती
ट्रयाक्टर दुर्घटनामा एकको मृत्यु
लकडाउन उल्लंघन गर्ने ६२ सवारी कारबाहीमा